Ukuveliswa kwesitayile somlilo eChina kunye neFektri | Jiashun
Is shutter yomlilo luhlobo lothintelo lomlilo kunye nezixhobo zokugquma ubushushu ezilungele ukuvuleka okukhulu kwezakhiwo. Imveliso idlala indima ethile kuyilo nakufakelo. Itekhnoloji, kunye nesakhelo, sinokuhlangabezana neemfuno zokuzinza komlilo kunye nengqibelelo yokumelana nomlilo. Is shutter yomlilo luhlobo lwezixhobo zokuhambisa umlilo ezishenxisekayo.
Is shutter yomlilo luhlobo lothintelo lomlilo kunye nezixhobo zokugquma ubushushu ezilungele ukuvuleka okukhulu kwezakhiwo. Imveliso idlala indima ethile kuyilo nakufakelo. Itekhnoloji, kunye nesakhelo, sinokuhlangabezana neemfuno zokuzinza komlilo kunye nengqibelelo yokumelana nomlilo. Is shutter yomlilo luhlobo lwezixhobo zokuhambisa umlilo ezishenxisekayo. Ihlala isongwe kwaye ibekwe kwibhokisi yeshafti ngaphezulu komnyango kunye nefestile. Xa kuqhambuka umlilo, uya kuvulwa ukuthintela umlilo ukuba unganwenwi ukusuka emnyango nasezifestileni. I-shutter yomlilo isetyenziswa ngokubanzi kwindawo yokwahlula umlilo kwizakhiwo zorhwebo nezoluntu. Inokuthintela ngokufanelekileyo ukusasazeka komlilo kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lobomi nepropathi. Sisibonelelo esibalulekileyo sokuthintela umlilo kwizakhiwo zale mihla.
Ngokwenyani ukuba ezinye zezi zinto zinomdla kuwe, nceda usazise. Siya kukuvuyela ukukunika ikoteyishini yakufumana iinkcukacha zomntu. Sineengcali zeR & D zethu zobuchwephesha ukuze sihlangabezane nayo nayiphi na indawo yokuhlala, Sijonge phambili ekufumaneni imibuzo yakho kungekudala kwaye sinethemba lokuba nethuba lokusebenza kunye nawe ngaphakathi kwikamva. Wamkelekile ukuba ujonge umbutho wethu.
Xa yayivelisa, isebenzisa eyona ndlela iphambili yokusebenza ngokuthembekileyo, amaxabiso asilelayo asezantsi, ilungele ukhetho lwabathengi baseJeddah. Ishishini lethu. emi ngaphakathi kwizixeko eziphucukileyo zesizwe, ukugcwala kwewebhusayithi akunabungozi, iimeko ezizodwa zejografi nezezezimali. Silandela "ukujolisa ebantwini, ukuvelisa ngenyameko, ukuqiqa, nokwenza ubuqaqawuli benkampani". Ulawulo olusemgangathweni olungqongqo, inkonzo emnandi, iindleko ezifikelelekayo eJeddah kukuma kwethu kwindawo esikhuphisana nayo. Ukuba kuyimfuneko, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ngephepha lewebhu okanye ngokubonisana ngefowuni, siya kukuvuyela ukukunceda.
Egqithileyo Iteyiphu yokuncamathelisa intsimbi